Bebetto - stroller 2-ku-1, Transformers, sihambahamba
inkampani Bebetto ngokukhethekile ukukhiqizwa kwezimpahla izingane. imikhiqizo Izindleko Bebetto ngokuvamile aphansi, izimo zivuma kutakhamuti. Phakathi namakalishi ekhiqizwa kukhona Transformers, amamojuli kanye 2-ku-1, futhi uhambo.
Abantu abahamba ngezihlalo ezinamasondo Bebetto ivolkano - edonsa ngawo wonke amasondo imoto nganoma yisiphi isimo sezulu!
Mhlawumbe omunye ethandwa kakhulu namuhla sabakhubazekile Modular - ke Bebetto "ivolkano". Lokhu ezokuthutha, okuyinto uzizwa okuhle emigwaqeni yethu, ukubhekana kalula ngodaka, iqhwa, amatshe nesihlabathi. Amasondo yobukhulu elikhulu benethuba eguqulayo. Cushioning uhlelo wheelbase inemandla, ngakho stroller ubhekana imigwaqo engalingani. Lezi zimoto ingasetshenziswa kulo lonke "prams" isikhathi ekuphileni komntwana, okungukuthi, kwasekuzalweni kwakhe kuze ngisho nalapho sengineminyaka emithathu. Inzuzo enkulu yale imodeli - kungenzeka ukufakwa ku-chassis aluminium nemibhede hooded ethokomele noma injabulo isihlalo nemoto esihlalweni. Setha iyiphi yalezi izinto ngezindlela ezimbili: ukuze ingane lalibheke phambili endleleni, noma ukuze abone abazali. A ibhonasi ezimangalisayo ezivela inkampani Bebetto: Series strollers "ivolkano" unikezwe voluminous nesembozo efudumele kakhulu, okuyinto eyonikeza induduzo esiphezulu kanye nemfudumalo phakathi nobusika uhamba.
Bebetto ivolkano: zokuphepha nenduduzo wosana
Konke kulesi sihloko olunikezwe ukunakekela ingane nge izinsuku zakhe zokuqala. Ngenxa yalesi umcabango ngokusebenzisa ingaphakathi carrycot: izicubu zomzimba ezithambile ukukhanya ephephile anemibala, embhedeni sasivumela ivulekile, buthule adjustable hood umthamo. Bassinet kombhede Ukuvalwa, ukufinyelela akunzima ukuba ingane. Ngo hood, zikhona amawindi. Isihlalo iyunithi ifakwe amabhande ukuphepha, okuyinto silungise ingane phambili ngamaphuzu ayisikhombisa: phakathi kwemilenze okhalweni namahlombe. Ngenxa yalesi unina ngisho izingane ukubuyisa kakhulu kungase kungadingeki ukuba ukhathazeke izingane zabo. Ukuvikelwa engeziwe bunikezwa bumper, ezingasetshenziswa zisuswe uma kunesidingo.
Bebetto namakalishi ifakwe konke okudingekile, abazali ngeke adala ubuchopho babo futhi bashesha beyofuna izesekeli ulahlekile. Setha "ivolkano" imodeli siqukethe okuhlala chassis lensimbi amasondo esikhiphekayo bassinet, imbeleko, injabulo esihlalweni, raincoat, anezikhala-moskitki, ngci ikhava ebusika, izikhwama ngobuningi izinto zezingane. Ngaphezu kwalokho, exhunywe chassis ngobuningi inqola yokuthenga, kulo okuningi.
Izinzuzo futhi enye idatha lobuchwepheshe
Ivolkano Bebetto - strollers, etholakala lapho elula futhi kumnandi. Ukuze induduzo uhlelo encane umgibeli backrest yakhelwe, okungathatha yimiphi izikhundla ezine. Footrest zingenza ukunikeza noma yimuphi engela. Kuzo zombili izinhlangothi ingane emoyeni thembeke ukuvikela amabhuzu ezithambile okusezingeni eliphezulu. Hood ivolumu eyaneleyo, ukuvikeleka okuhle okuvela elangeni ehlobo kanye ecasulayo shrill ekwindla dampness, futhi kungenziwa kalula sisuswe uma kunesidingo.
Isibambo uyindawo ukuthutha adjustable - lokhu kuyinto inzuzo amalungu omkhaya amadala. Lapho izinkomba ezinjalo mikhulu sabakhubazekile isisindo (17.8 kg) Akumangalisi lokhu, futhi phambili.
Ukukhetha abazali ezinengqondo
Njengoba ubona, strollers Bebetto "ivolkano" has zonke izici ezidingekayo ukuze ukuphepha lula kid induduzo abazali bakhe. Ngaphezu kwalokho, izindleko eliphansi le model amehlo abaningi.
Coloured amapensela - futhi bayini? Njengoba ukudweba?
Shaker for amaprotheni - umngane we umdlali kweqiniso. Khetha ngokuhlakanipha
Umswakama nesihlobo futhi ngokuphelele umswakama: izici nesilinganiso nokuzimisela